Feed Pellet အရွယ်အစား: 0.9~ 15mm
ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်စက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောငါးအစာလေးများပြုလုပ်ရန်ရှာဖွေသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာဖြစ်သည်. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်စက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံငါးအစာတောင့်စက်ဟုလည်းခေါ်ကြသည်. ၎င်းသည်ငါးများအတွက်ရေနေအစားအစာအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ပုစွန်, ကဏန်း, နှင့်အခြားရေနေမျိုးစိတ်အမျိုးမျိုး.
အပူအမျိုးမျိုးရှိသောငါးအစာထုတ်စက်ကိုအစေ့အမျိုးမျိုးကိုအဆင့်မြင့်ရေနေသတ္တဝါများအစာတောင့်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်း, စသည်တို့. ငါးအစာဖြန့်ဖြူးစက်မှထုတ်လုပ်သောနောက်ဆုံးလုံးလေးများသည်ထူးခြားသောပုံစံရှိသည်, အရသာကောင်း။ မျှတသောအာဟာရဓာတ်. ၎င်းကိုလျှပ်စစ်မော်တာနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်,ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်သောအခါ,ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်သင်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုချွေတာနိုင်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်စတင်သည်.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, တောင့်ငါးများကိုအစာကျွေးခြင်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, ၎င်းသည်ငါးမွေးမြူသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်. သို့သော်, ငါးအစာသည်ငါးမွေးမြူသူများအတွက်အဓိကအသုံးစရိတ်ဖြစ်သည်. ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်, ငါးအစာတောင့်များကိုမိမိတို့ဘာသာလုပ်ခြင်းသည်လယ်သမားများကို ဦး စားပေးသောအရာဖြစ်သည်. သငျသညျကိုယျ့ကိုယျကိုအားဖြင့်ငါးတောင့်လုပ်လိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့အမျိုးအစားငါးအစာကျွေးခြင်း extruder, ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုရေပေါ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်အထူးကျွမ်းကျင်သူ, ပညာရှိရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်. ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွင်ငါးအစာကျွေးသောစက်သည်ကုန်ကြမ်းများကိုရေငွေ့မအေးစေဘဲအရည်အသွေးမြင့်သောရေပေါ်ငါးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်. အစာတောင့်များကိုငါးမွေးမြူရေးငါးများကျွေးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, ငါးကြင်း, ရွှေငါး, အပူပိုင်းဒေသငါး, ပုစွန်, မြဝတီ, mink နှင့်ပင်လယ်ငါးရှဥ့်စသည်တို့. ဤခြောက်သွေ့သောရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစာထုတ်လုပ်သည့်အပင်များနှင့်ငါးမွေးမြူရေးတို့တွင်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်.
1. အဆိုပါကုန်ကြမ်းကိုရှာဖွေလွယ်ကူသည်, ပြောင်းဖူးမုန့်ညက်လိုပဲ 50%, ဂျုံမှုန့်ဂျုံမှုန့် 40%, ပဲပုပ်မုန့်ညက် 3%, ဆန်မှုန့် 5%, အသား 2%
2. ထွက်ရှိအတောင့်သည် ၁၂ နာရီအတွင်းရေပေါ်မျောပါသွားပြီးမဖြန့်ကျက်နိုင်ပါ
4. မြင့်မားသောအပူချိန်မှတဆင့်အစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများပြီးနောက် Escherichia coli နှင့် Salmonella ကဲ့သို့သတ်ဖြတ်လိမ့်မည်, ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစာကိုစားခြင်း၊, ငါးများကိုစားရန်နှင့်အစာကြေရန်လွယ်ကူစေသည်, သင့်ရဲ့ငါးကြီးထွားလာစေ.
5. 1mm-12mm ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားကိုပြုလုပ်နိုင်သည် , ကလေးငယ်မှငါးကြီးသို့အစာကျွေးနိုင်သည်
8. သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက် 50kg / h-8T / h output မှ semi-automatic နှင့် automatic များရှိသည်.
1.သိုလှောင်ခြင်း: ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားပါက ၂ လမှ ၃ လအထိထားနိုင်သည်.
2.တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု: တိုးချဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အများဆုံးဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်. အနိမ့်အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု (အကြောင်း 10%) ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်.
3.အာဟာရ: တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ်စက်ရုံပရိုတိန်းနှင့်အတူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်, ငါးဆီသို့မဟုတ်အခြားအဆီ, တိကျသောငါးမျိုးစိတ်များလိုအပ်ဗီတာမင်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်သတ္တုဓာတ်. ၎င်းသည်အလွန်အာဟာရရှိသောကြောင့်ငါးများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေနိုင်သည်.
4.ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ: သင့်လျော်သောအရွယ်အစားနှင့်သိပ်သည်းဆရှိသောတောင့်တောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကိုကျဆင်းစေပြီးအစာအကြွင်းအကျန်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်.